Yope Star :G-tone
မင်္ဂလာပါ YOPE သူငယ်ချင်းတို့ရေ.. ဒီနေ့ YOPE Star ရဲ့ red chair ပေါ်ကိုရောက်လာတဲ့သူကတော့ Hip Hop လောကရဲ့ Second Generation rap အဆိုတော် Gtone ဖြစ်ပါတယ် သူက YOPE မေးခွန်း ၅ ခုကို ဘယ်လိုစိတ်ဝင်စားစရာ အဖြေတွေပေးသွားမလဲဆိုတာ ကြည့်လိုက်ပါဦး…..
RED Chair Meets Model Thandar Hlaing
Yope April 5, 2017
မင်္ဂလာပါ YOPE သူငယ်ချင်းတို့ရေ. ဒီနေ့ RED CHAIR ပေါ်ရောက်ရှိလာသူကတော့ မော်ဒယ်သန္တာလှိုင်ဖြစ်ပါတယ်. သူရဲ့ YOPE မေးခွန်း ၅ ခုကို အဖြေတွေကို သူငယ်ချင်းတို့အတွက် တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါရစေ..
Yope Star – Than Paing
Yope November 11, 2016
မင်္ဂလာပါ YOPE သူငယ်ချင်းတို့ရေ.. ဒီနေ့ YOPE star ကတော့ ဘောလုံးလောကမှာ ပရိတ်သတ်ရဲ့ ချစ်ခင်မှုကို ရရှိထားတဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ မြန်မာ့လက်ရွေးစင်တိုက်စစ်မှူး သန်းပိုင်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ YOPE ရဲ့ မေးခွန်း ၅ ခုကို သူဘယ်လိုတွေပြန်ဖြေပေးထားလဲဆိုတာကိုတော့ video လေးမှာကြည့်ပြီး အားပေးပါဦးနော်.. စာသားဖြင့် ဖတ်ရှုလိုပါက အောက်ပါလင့်ကိုနှိပ်ပါ. မိသားစုကို လုပ်ကျွေးနေတဲ့ သားတစ်ယောက် ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ သန်းပိုင်